ग्यालेक्सी नोट 8 को यो भविष्य अवधारणा ग्यालेक्सी S8 को सबै भन्दा राम्रो लिन्छ Androidsis
यो धेरै सम्भव छ कि भविष्य ग्यालेक्सी नोट 8 द्वारा धेरै प्रेरित हुनेछ ग्यालेक्सी S8कम से कम डिजाइन को मामला मा, कि सैमसंग व्यावहारिक रूप मा हरेक पटक गरे पछि। अब हामी ग्यालेक्सी नोट 8 को अन्तिम डिजाइन को माध्यम बाट के जस्तो लाग्न सक्छ भन्ने बारे एक राम्रो विचार प्राप्त गर्न सक्छौं एक अवधारणा भिडियो.
अघिल्लो वर्षहरुमा, ग्यालक्सी एस दायरा मा स्मार्टफोन ग्यालेक्सी नोट को विशिष्टताहरु र घटक को लागी मुख्य प्रेरणा बन्नुभयो। दुई दायराहरु को बीच सबैभन्दा ठूलो भिन्नता स्टाइलस को उपस्थिति र सबै को लागी जो एक सटीक डिजाइन बनाउन वा एक क्लासिक तरीका मा नोट्स लिन चाहान्छन् को लागी एक ठूलो पर्दा थियो।
गत बर्ष को अन्तिम क्वार्टर मा ग्यालेक्सी नोट7को साथ असफलता पछि, धेरैले सोचे कि सैमसंग नकारात्मक प्रचार को कारण यन्त्रहरु को यो श्रृंखला छोड्नेछ। बजार बाट टर्मिनलहरु फिर्ता लिएको बावजूद, त्यो घटना को केहि बेर पछि कम्पनीले पुष्टि गर्यो कि यो नोट दायरा भित्र नयाँ मोडेलहरु लाई जारी राख्न को लागी जारी रहनेछ।
को वरिपरि देखाउने मनसाय बर्लिनमा आईएफए २०१।अहिले को लागी, धेरै विवरणहरु ग्यालेक्सी नोट 8 को बारे मा थाहा छैन। मात्र एक चीज हामी जान्दछौं ग्यालेक्सी S8 को डिजाइन बाट प्रेरित हुनेछ र सम्भवतः सुविधा हुनेछ स्टाइलस होल्डर.
यी दुई तत्वहरु को एक परिणाम को रूप मा, डिजाइनर Muhsin एम Belaal Auckburaully माथिको भिडियो को निर्माण को लागी यूट्यूब च्यानल डीबीएस डिजाइनिंग सम्पर्क। यो ग्यालेक्सी नोट 8 को लागी एक अवधारणा भिडियो हो कि अफवाहहरु वा लीक बाट शुरू भएको छैन कि अब सम्म भएको छ, तर केवल अर्को phablet को डिजाइन को बारे मा यसको सिर्जनाकर्ताहरु को विचार को materializes।
विवरण को लागी कि हामी यस भिडियो बाट प्राप्त गर्न सक्छौं, ग्यालक्सी S8 संग समानताहरु स्पष्ट भन्दा बढी छन्। स्क्रिन स्मार्टफोन को सम्पूर्ण अगाडि हावी छ, माथी र तल मा धेरै विवेकी bezels को बाहेक।
बरु पक्षहरु मा घुमावदार किनारहरु हुनुको सट्टा, यी अवधारणा छवि मा केहि चापलूसी छन्। अर्कोतर्फ, हामी देख्न सक्छौं कि डिजाइनरहरु पनि एक शामिल ग्यालेक्सी नोट 8 को पछाडि दोहोरो क्यामेरा, ग्यालेक्सी S8 मा मात्र क्यामेरा विपरीत।
छोटो मा, हामी अझै पनी धेरै लामो महिना पर्खनु पर्छ अर्को ग्यालेक्सी नोट 8 को प्रस्तुति सम्म टर्मिनल को अन्तिम डिजाइन कस्तो हुनेछ पत्ता लगाउन को लागी।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Samsung » ग्यालक्सी नोट of को यो भविष्य अवधारणा ग्यालेक्सी एस of को सबै भन्दा राम्रो एकीकृत गर्दछ
एन्ड्रोइडका लागि नयाँ पारिवारिक गाय खेल अब उपलब्ध छ